Nampitsahatra ny roa ampahatelon'ny Britanika tsy handeha any ampitan-dranomasina ny rafitra jiro fifamoivoizana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Nampitsahatra ny roa ampahatelon'ny Britanika tsy handeha any ampitan-dranomasina ny rafitra jiro fifamoivoizana
Miaraka amin'ny fanesorana ny andramena amber, namela mena sy maitso fotsiny. Ho hita eo raha hampisy fahatokisana ny Brits izay te handeha any ivelany amin'ny fialan-tsasatra ity hetsika ity.
Ny roa ampahatelon'ny Brits dia manome tsiny ny rafitra jiro fifamoivoizana noho ny fanapahan-kevitr'izy ireo tsy hanao fialan-tsasatra any ampitan-dranomasina tamin'ny taon-dasa, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Amin'ireo izay tsy nanao fialan-tsasatra tany ivelany tao anatin'ny 12 volana lasa, 66% no namaly 'eny' tamin'ny fanontaniana hoe: Moa ve ny rafitra jiron'ny fifamoivoizana nampidirin'ny governemanta UK ho an'ny fitsangatsanganana any ivelany dia nanakana anao tsy handeha any ampitan-dranomasina tamin'ny taon-dasa?
Rehefa nampidirina izy io, ny rafitra jiro fifamoivoizana dia noraisina ho fomba mora takatry ny Governemanta hanamarihana ny toerana haleha araka ny antontan'isa Covid, ary hamaritana raha tsy maintsy manao confinement ny olona miditra any UK na tsia.
Na izany aza, nisy tranga maromaro nafindra toerana ho an'ny amber na mena, niteraka korontana teo amin'ireo mpiala sasatra izay matetika nomena 48 na 72 ora vao mody, na voatery nanafoana ny drafitra. Fanampin'izany, nampiditra ambaratonga fanampiny ny Governemanta – ny lisitry ny 'famantaranandro maitso', ireo toerana atahorana hivadika ho amber.
Nolazain'ireo namaly ny WTM Industry Report fa ny tsy fahatokisana ny jiron'ny fifamoivoizana dia nahatonga azy ireo tsy handeha tao anatin'ny 12 volana lasa.
“Tsy afaka nieritreritra i Boris Johnson isaky ny iray minitra hoe inona ny firenena misy loko. Tsy mendrika ny hivezivezy any ivelany fotsiny amin’izao fotoana izao”, hoy ny mpamaly iray.
Nanazava ny iray hafa hoe: "Tsy te handoa vola aho amin'ny fitsapana COVID ary mijanona ao an-trano mba hanao confinement."
“Miova amin'ny fotoana fohy izany ary tena mampisafotofoto – misafotofoto ny Governemanta ary tsy mahalala izay ataony. Boris dia mivadika avy amin'ny fanapahan-kevitra tsy voahevitra iray mankany amin'ny iray hafa, ”hoy ny mpamaly iray hafa.
Nanazava ny fahefatra fa nesorin'ny rafitra jiron'ny fifamoivoizana izy ireo: "Satria manova ny rafitra tsy misy fampandrenesana mihitsy izy ireo ka mety ho voatery hitokantokana tsy misy filazana ianao."
Amin'ireo Britanika ambiny amin'ny telo izay tsy nanao fialan-tsasatra tany ampitan-dranomasina tao anatin'ny 12 volana lasa izay, ny sasany dia nilaza fa tsy nahatsiaro tena tamin'ny diany.
“Tsara loatra ny risika ka nisafidy ny hiandry. Tsy ny rafitra jiron’ny fifamoivoizana fa ny Covid no nanakana anay », hoy ny iray.
Ny talen'ny WTM London Exhibition Simon Press dia nilaza hoe: "Ny rafitra jiro fifamoivoizana dia natao ho dikan-tsarimihetsika tsotsotra amin'ny rafitra lalantsara fitsangatsanganana amin'ny taona 2020 - fa raha ny marina, dia sarotra be izany, angamba mihoatra noho izany.
“Sahirana hatrany ny zotram-piaramanidina, ny mpandraharaha ary ny toerana haleha noho ny tsy fisian'ny firenena ao amin'ny lisitra maitso ary tsy maintsy mihetsika haingana rehefa miakatra na midina ny naotin'ny jiron'ny fifamoivoizana ireo firenena, matetika ao anatin'ny fotoana fohy.
"Ankoatra izany, ny lisitry ny jiro fifamoivoizana dia tsy mitovy amin'ny tari-dalan'ny Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) momba ny dia mankany amin'ny toerana iray manokana, noho izany dia mila manamarina ny roa ny mpandeha. Mba hanampiana fahasarotana bebe kokoa dia tsy voatery misokatra ho an'ny Brits ny firenena misy lisitra maitso, noho izany dia nisafotofoto tanteraka ny rafitra manontolo.
“Noho ny fanesorana ny andramena amber, namela mena sy maitso fotsiny. Ho hita eo raha io hetsika io dia hanome fahatokisana ny Brits izay te handeha any ivelany amin'ny fialan-tsasatra. ”